မြစေတီကျောက်စာ - ဝီကီပီးဒီးယား
၂ ကျောက်စာတိုက် နှစ်တိုက်
၄ ကျောက်စာ စာသား ပုံများ
ပုဂံမြို့တောင်ဘက်၊ မြင်းကပါရွာရှိ မြစေတီဘုရားအနီး၌ တွေ့ခဲ့သည်ကို အကြောင်းပြု၍ မြစေတီ ကျောက်စာဟု အမည်တွင်လျက်ရှိသော ကျောက်စာကား ရှေးပုဂံခေတ်ဟောင်းတွင် ရေးထိုးသော ကျောက်စာများအနက် လက်ဦးကျရုံမကဘဲ သမိုင်းနှင့် စာပေတို့ကို ခန့်မှန်းသုံးသပ်ရာ၌ အထောက်အကူပြုသောကြောင့် အလေးတမူ ဂရုပြုကာ အရေးထားအပ်သော ကျောက်စာဖြစ်၏။ ယင်းကျောက်စာကို ဂူပြောက်ကြီး ကျောက်စာဟူ၍လည်းခေါ်ကြသည်။
မြစေတီ ကျောက်စာတိုက်နှစ်တိုင်ရှိရာ၊ ပုဂံပြတိုက်တွင် ကျောက်စာတိုင် တစ်ခုရှိ၍၊ မြင်းကပါ မြစေတီ ရင်ပြင်ပေါ်တွင်ကျောက်စာတိုင် တစ်ခုကို စိုက်ထူထား၏။ ပုဂံပြတိုက်တွင်ရှိသော ကျောက်စာတိုင်ကို ခရစ်နှစ် ၁၈⁠၈၆ - ၈၇ ခု( မြန်မာ ၁၂၄၈ ခုနှစ်ခန့်) တွင် ရန်ကုန်အစိုးရ ကောလိပ်ပါဠိစာ ပါမောက္ခနှင့် အစိုးရ ကျောက်စာဝန်အဖြစ် တွဲဖက်ရွက်ဆောင်သော ဂျာမန်ပညာရှိ ဒေါက်တာ ဖိုရှမ်းမားသည် ပုဂံမြို့ တောင်ဘက် မြင်းကပါရွာအနီး မြစေတီခြေရင်း၌ ကပ်လျက်စတင်တွေ့ရှိခဲ့၏။ မြစေတီ ရင်ပြင်ပေါ်တွင်စိုက်ထူထားသော ကျောက်စာတိုင်ကိုမူ ဂူပြောက်ကြီးလိုဏ်ဂူအတွင်း၌ ၃ ပိုင်း ကျိုးပြတ်လျက် စတင်တွေ့ခဲ့ရလေသည်။
မြစေတီကျောက်စာပါ စကားပြေသည် ရှေးအကျဆုံးဖြစ်သော စကားပြေတရပ်ဟု ဆိုသင့်ပေသည်။ သတ်ပုံသတ်ညွှန်း စကားအသုံးအနှုန်းတို့မှာ အချို့သောနေရာတွင် ယခုကာလနှင့်မတူဘဲ ကွာခြား၏။ သို့ရာတွင် ယခုကာလအသုံးနှုန်းသည် အများအားဖြင့် ရှေးရေးအသုံးအနှုန်းမှ ဆင်းသက်လာသည်ကို သတိမူရာသည်။ ဝါကျများကို တို⁠တိုနှင့် အဓိပ္ပာယ်ပေါ်ရုံ ရေးထား၍ ထိရောက်၏။ သတ်ပုံသတ်ညွှန်း တို့မှာ မြန်မာစာ အရေးအသား အစပျိုးချိန်ဖြစ်၍ ယခုခေတ်ကဲ့သို့ အသားမကျသေးချေ။ ပျူ၊ မွန်နှင့် ပါဠိဘာသာများဖြင့်ရေးထိုးသည်ကို ထောက်သော် ထိုခေတ်က မြန်မာလူမျိုး သာမက ပျူလူမျိုး၊ မွန်လူမျိုးတို့ ထွန်းကားလျက် ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ မြတ်စွာဘုရား၏ မုခပါဌ်တော်ဖြစ်သော ပါဠိဘာသာ အရှိန်အဝါ ရပြီးဖြစ်ကြောင်းကို သိသာနိုင်ပေသည်။
တဖန် သမိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထားအဖြစ် အသုံးဝင်အဖိုးတန်ပုံမှာ လည်း မြစေတီ ကျောက်စာတွင် တြိဘုဝနာဒိတျဓမ္မရာဇာခေါ် ကျန်စစ်သား မင်းသည် သာသနာနှစ် ၁၆၂၈ တွင် နန်းတက်သည်ဟု ဆို၏။ မြစေတီကျောက်စာသည် မူလရှေးဦးခေတ်ကမျက်မှောက် ရေးထိုးခဲ့သော ကျောက်စာဖြစ်ခြင်းကြောင့် မှန်ကန်သော အကိုးအကား အဖြစ်ယူနိုင်ကာ ကျန်စစ်သားမင်း၏ နန်းတက်သက္ကရာဇ်၊ နန်းစံသက္ကရာဇ်နှင့် နတ်ရွာစံသော သက္ကရာဇ်များကို အတိအကျ ထုတ်ဖော်နိုင်လေသည်။ ထိုကျောက်စာပါ သက္ကရာဇ်မှာ ဇာတာတော်ပုံပါ ရာဇဝင်သက္ကရာဇ်နှင့်လည်း တူညီတိုက်ဆိုင်သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် အနော်ရထာ၊ စောလူးနှင့် အလောင်းစည်သမင်းတို့၏ နန်းစံ သက္ကရာဇ်တို့ကိုပါ တွက်ချက်ထုတ်ယူနိုင်ပေသည်။ ထို့ပြင် ထိုမြစေတီ ကျောက်စာကို ပျူစာ၊ မွန်စာတို့ဖြင့် ရေးထိုးထားသည်ကိုတွေ့ရသော ကြောင့်လည်း မြန်မာစာနှင့် ယှဉ်ကာ၊ အဓိပ္ပာယ် ဖော်နိုင်ကြ၍ အထူးသဖြင့် ပျူစာကိုလေ့လာရာ၌ သဲလွန်စရနိုင်သဖြင့် နှောင်းပညာရှိတို့အတွက် အဖိုးထိုက်တန်လှသော ကျောက်စာ ဖြစ်ပေသည်။ ထို့အပြင် ရာဇကုမာရ်သည် ထီးနန်းစည်းစိမ်ကို မဆက်ခံရသော်လည် အမိအဖိ၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို မည်မျှ သိတတ်ရိုသေ ကိုင်းရှိုင်းတတ်သော သားကောင်းရတနာ ဖြစ်ကြောင်း ဤမြစေတီကျောက်စာကို ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် သိသာနိုင်ပေသည်။
ဂြီ။ ဗုဒ္ဓါဒိကံ ဝတ္ထုဝရံ နမိတွာ ပုညံ ကတံ ယံ ဇိနသာ
ကျောက်စာ စာသား ပုံများပြင်ဆင်
↑ Myazedi and Rosetta Stone Inscriptions (Dr. Khin Maung Nyunt)။ 8 February 2005 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ မြန်မာနိုင်ငံဘာသာပြန်စာပေအသင်း (၁၉၆၅)။ "မြစေတီကျောက်စာ"။ in မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း စာတည်းအဖွဲ့ (ed.)။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း။ ၉ (ပဌမအကြိမ် ed.)။ စာပေဗိမာန်ပုံနှိပ်တိုက်၊ ရန်ကုန်မြို့။: စာပေဗိမာန်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြစေတီကျောက်စာ&oldid=744385" မှ ရယူရန်
၂၃ မေ ၂၀၂၂၊ ၀၀:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ မေ ၂၀၂၂၊ ၀၀:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။